မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: SungKyunKwan Big Man မင်းသမီး Park Min Young နှင့် အင်တာဗျူး...
Posted by mabaydar at 10:33 PM
i think i should do double eyelid surgery too..haha..my mom wanted me to do it..not sure she jokes about it or not :D
ခေါင်းဆောင်မင်းသားထက် ဒုတိယမင်းသား ၂ယောက်ကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။
သူတို့တွေ အတော်ပင်ပန်းကြရတယ်နော်... ဘယ်အလုပ်မဆို ပင်ပန်းတာပါပဲလေ...
ဒီကားမှာတော့ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကို Annoying မဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက် ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကားတကားပါ။
sis. eye lid surgery is very minor. I heard it is not much painful. that person said it was just like ears pierced.
ပိုလှအောင် ပြုပြင်ယူတာကို အပြစ်လို့ မထင်ပါဘူး။ တခါတလေ အားတောင်ကျမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသားနာမှာရယ် ပိုက်ဆံကုန်မှာကြောက်တာရယ်..
cosmetic surgery က လွယ်ကူလာတော့ တော်တော်များများ လုပ်လာကြပါတယ်..
မဗေဒါ ပြောသလိုပဲ..မာနကြီးသွားရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့..။
eyelid surgery က minor မှန်း မဗေဒါ သိပါတယ်... မဗေဒါပြောတာက မေးရိုး မျက်နှာကျ ပြင်တာကိုပြောတာပါ... မျက်နှာလေး သွယ်သွယ် ချွန်ချွန်ကျနေဖို့အတွက် ရှိတဲ့ မေးရိုးတွေကို ကော်ပတ်စားသလို စားပြီး ပြင်တဲ့ မေးရိုး surgery (ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ အတိအကျမသိ) ကတော့ Major surgery လို့ ပြောတာပါ... သူ့ကြည့်ရတာ အဲဒိ ဟာပါ လုပ်ထားသလိုပဲလို့ မဗေဒါ ထင်တာကိုပြောတာပါ... သူကတော့ မျက်ခွံနဲ့ နှာတံ minor surgery ၂ ခုပဲ လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... Anyway, I still love her for beingagood actress.
She is also from "Unstoppable high kick"right.I like it very funny.
အတူတူပဲ။ ခေါင်းဆောင်မင်းသား Micky ကို စစ ကြည့်ခါစက မကြိုက်ဘူး။ playboy လုပ်တဲ့ မင်းသား Song Joong Ki ကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ I'm Goo Yong Ha lay...Goo Yong Ha လို့ပြောတဲ့ ပုံစံလေးက တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ I'm Sam ဇတ်လမ်းကို မကြိုက်ပေမဲ့ အဲဒီကားကြည့်တုံးက မင်းသမီးကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ သတိထားမိတယ်။ ဆရာလုပ်တဲ့မင်းသားကတော့ လုံးဝကိုမကြိုက်ပါ။
11/12/2010 12:01 PM
လောလောဆယ် ဒီကားရယ် Fugitive ရယ် ၂ ကားကြည့်ဖြစ်နေတယ်...
ကြည့်သာကြည့်နေတာ သရုပ်ဆောင်တွေ ဘယ်တုံးက ဘယ်ကားထဲပါခဲ့မှန်းမသိဘူး...
ခုမှ နည်းနည်း ဗဟုသုတ ရသွားတော့တယ်..။
မင်းသမီးလေးက မိန်းကလေးလို ဝတ်တဲ့တစ်ခန်းကျမှ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းမှန်းသိရတယ်...
မဗေဒါ ဘလောက် ထဲ ကိုဝင်ကြည့်မိတယ်။ခရီးသွားတာ
ရတာ၊သွားလည်ရတာ အရမ်းကို ၀ါသနာပါတယ်။ဒါပေ
မယ့် သွားလည်ဖို့ အခွင့်အရေးသိပ်မရှိဘူး။ဓါတ်ပုံရှုခင်း
တော့ ရောက်ဖြစ်ရင် မဗေဒါလိုပဲ ဓါတ်ပုံလေးတွေဖေါ်ပြ
လေးတွေလဲတင်ပေးစေခြင်ပါတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှုခင်း
တွေဟာလဲ လှပသာယာတယ်ဆိုတာ။ အမိမြေကိုလွမ်း
လို့ ပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒေသတော်တော်များများကိုရောက်
ကိုယ့်မြန်မာပြည် ရှုခင်းတွေက ပိုလှသလားလို့ ပါ။